Michael (horonantsary, 2011) - Wikipedia
Michael dia horonantsary aostrisianina navoakan'i Markus Schleinzer tamin'ny taona 2011 izay mitovy amin'ny trangan'i Natascha Kampusch amin'ny lafin'ny mpaneloka. Izy io dia nifaninana tamin'ny horonantsary hafa tao amin'ny fetiben'i Cannes 2011. Io no horonantsary nentin'i Schleinzer voalohany indrindra.
Ny lohatenin'ny horonantsary dia olona miasa amin'ny orinasan'antoka izay manana fiainana milamina ary tsy be sorisory. Mitazona zazalahy folo taona izay mitondra ny anarana hoe Wolfgang izy, ao amina efitra ambanitanin'ny tranony. Manolana ilay zazalahy izy, fa raha tsy izany dia mifanerasera toa ny ray sy ny zanany izy ireo. Amin'ny hariva, dia hidian'i Michael ny varavarana ary varavaran-kazo, ary avela mitoetra ao amin'ny trano fiainna ary mihery fahitalavitra i Wolfgang. Rehefa niditra hopitaly noho ny lozam-pifamoivoizana i Michael dia maika nody tany an-trano mba tsy hamela an'i Wolfgang irery ao amin'ny efitra ambany tany. Rehefa narary i Wolfgang dia nandavaka fasana ho azy anaty ala i Michael, raha sanatria ka maty i Wolfgang. Sitrana kosa izy taoriana. Manoratra taratasy ho an'ny ray aman-dreniny ilay zazalahy, taratasy izay natao ho alefan'i Michael, fa mandainga amin'i Wolfgang i Michael ary tsy mandefa azy ireo, milaza fa tsy tian'ny ray aman-dreniny intsony hono izy.
Tsindraindray dia entiny mitsangantsagana any ivelan-tanàna ilay zazalahy, any amin'ny toerana tsy ahafantaran'olona azy. Indray mandeha izy dia lasa nanao ski niaraka tamin'ny namany nandritra ny andro maromaro, ary namela sakafo be kokoa ho an'i Wolfgang, izay manana rano, fidiovana, toeram-panaovan-tsakafo tsotsotra ary fahitalavitra ao amin'ny efiny.
Mahatsiaro an'i Wolfgang ho manirery izy ka nampanantena azy ny fahatongavan'ny ankizy faharoa. Niara-nametraka fandriana ho an'ilay ankizy ho avy zareo. Nanandrana nangalatra zazalahy iray hafa i Michael tamin'ny alalan'ny fandresen-dahatra ny hipetraka ao amin'ny tr anony, fa nantsoin'ny rainy ilay zazalahya, ary nobedesiny noho izy miara-dia amin'ny olona tsy fantatra. Nolazain'i Michael fa tsy nahomby tamin'ny fanomezana azy izy. Indray andro, dia nanipy rano mangotraka tany amin'ny tarehin'i Michael i Wolfgang izay saika nanajamba azy, fa tsy tafalositra. Noho ny doron-drano mangotraka dia lasa nandeha fiara nitady mpitsabo i Michael, fa tsy nahita lalana ka matin'ny lozam-pifamoivoizana. Taorian'ny fandevenana azy dia mby hahita an'ilay zazalahy ny renin'i Michael, ary teo no niafaran'ny horonantsary.
Michael Fuith milalao an'i Michael
David Rauchenberger milalao an'i Wolfgang
Christine Kain milalao an'ny renin'i Michael
Ursula Strauss milalao an'ny rahavaviny
Victor Tremmel vadin'ny rahavaviny
Fanaovana[hanova | hanova ny fango]
Ilay horonantsary dia ahitana sehatra anehoan'i Michael ny latany an'i Wolfgang. Nampiasa fizaram-pikandra i Schleinzer mba tsy hihatrehan'i D. Rauchenberger izany.
Mifangaroharo ny tsikera azon'ilay horonantsary tao amin'ny fetiben'i Cannes. Na dia nantsoin'i Eric Kohn avy amin'i Indiewire hoe "fanjakan'ny horonantsary tsy mora: tsy nitranga hatry ny famaritan'i Todd Solondz ny pedôfilia amin'ny antsipirihany mampiferinaina". I Mike D'Angelo avy amin'i Esquire indray dia ni-tweet "WHAT THE FUCK IS WRONG WITH EVERYONE IN AUSTRIA. SERIOUSLY. Once again, very well made in the approved festival style, but I understand now exactly how detractors of Funny Games felt". ("INONA LOATRA NY TSY METY AMIN'NY REHETRA AO AOTRISY. MARINA. Vita tsara ao amin'ny endrika eken'ny fetibe, fa azoko amin'izay ny notsapan'ireo tsy mpomba an'i Funny Games")
((en)) Michael an'i Internet Movie Database
((en)) Michael an'i Rotten Tomatoes
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_(horonantsary,_2011)&oldid=809135"
Voaova farany tamin'ny 30 Novambra 2017 amin'ny 21:41 ity pejy ity.